Ingabe i-Z Nation Season 6 iza kuNetflix - Ukuzijabulisa
Ukubuka konke kwe-Z Nation Netflix Show
I-Z Nation Netflix Show Plot kanye nendaba
I-Z Nation Netflix Show Isizini 6 Izibuyekezo Ezisemthethweni
I-Z Nation Netflix Show Cast & Izinhlamvu
Kepha Kungani I-Z Nation Isizini 6 yeNetflix Show Ikhanseliwe
Bangaki kini ababukele uchungechunge lwe-Movie Ethusayo? Abaziyo bazovuma ukuthi bekuyifilimu impela! Futhi yawela ngaphansi kwesigaba samahlaya asabekayo njengochungechunge lweZ Nation Netflix. Kepha ake sishiye isihloko se-Scary Movie ngolunye usuku bese sigxumela embuzweni, ingabe kuzoba nesizini yesi-6 yochungechunge lweZ Nation Netflix?
Kanye namathuba ekusasa leZ Nation, sizophinde sixoxe ngolunye ulwazi mayelana nohlelo olukhohliwe. Uma ungabukanga uhlelo noma ulapha ukuze unqume ukuthi kufanele yini uwubuke noma cha, hlala ulindile njengoba sihlanganise zonke izinto eziyisisekelo eceleni kolwazi Lwesizini 6!
I-Asylum ikhiqize i-Z Nation, i-cocktail ye-American action-horror-comedy-drama nochungechunge lwe-TV lwangemva kwembubhiso. Yasakazwa kuSyfy futhi yathuthukiswa nguKarl Schaefer noCraig Engler.NgoSepthemba 12, 2014, isizini yokuqala yeziqephu eziyi-13 yaphuma okokuqala. Ukuqoshwa kwe-Z Nation kwenzeke esifundeni sase-Spokane, e-Washington.
U-Syfy umemezele ngoJuni 16, 2016, ukuthi isizini yesithathu ye-Z Nation izokwandulelwa ifilimu ye-TV esethwe ngaphambi kokuphela kwesizini 2 futhi yethule abalingisi ababalulekile besizini yesithathu.Le filimu, nokho, ikhonjiswe njengeziqephu ezimbili zokuvula isizini, enezingxenye ezimbili ethi No Mercy.
Njengoba kushiwo ngenhla, lesi sigaba esalabo abangakayibukeli le nkonzo futhi abangathanda ukunquma! Uma ulapha ukuze uthole izibikezelo zesikhathi esizayo zeSizini 6, sicela weqe lesi sigaba.
IZ Nation iqala eminyakeni emithathu ngemuva kokuthi igciwane libulale iningi labantu, okuholele ku-apocalypse ye-zombie. UMurphy wayengomunye wababoshiwe abathathu ejele lasePortsmouth Naval eKittery, eMaine. Babengahlanganyeli abangazimisele ekuhloleni okwagunyazwa uhulumeni ezinsukwini ezaholela ekuwohlokeni kwempucuko. Esikhundleni salokho, umgomo ohlukile wokuhlola wanikezwa isiboshwa ngasinye. UMurphy uyena kuphela owaphumelela ekugomeni ephila. Igazi lakhe liphethe amasosha omzimba amelela ithuba lokugcina nelingcono kakhulu lomuntu lomgomo. Ubonakala eguqukela ekubeni yi-zombie-human hybrid, isikhumba sakhe siyabhakuzisa futhi umzimba wakhe uphenduka ube luhlaza okwesibhakabhaka. Ubonakala ekwazi ukuthonya ngisho nokulutha ezinye izinhlobo zamaZombi ahlangana nazo; nokho, akakakhuli ngokugcwele aguqulwe abe yi-zombie futhi uyazilawula. Indaba ilandela yena kanye neqembu elincane labasindile njengoba bedlula ku-apocalypse ngosizo lukaSimon Citizen Z Cruller, oqapha umhlaba ngamakhompiyutha akhe amaningi. Uhlelo lokumsebenzisa ukumisa i-apocalypse ye-zombie.
UMurphy kumele ahanjiswe esuka eNew York ayiswe eCalifornia, lapho kunelebhu yokugcina eyaziwa emhlabeni wonke yeCenters for Disease Control. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, uMurphy unemfihlo embi ngempilo yakhe ebeka bonke engozini.
Ngeke sikuzonde ukukusho lokhu, kodwa sekusemthethweni manje, futhi ngeke ibe khona iSizini 6 yeZ Nation. Abenzi bakwenza kwacaca ngo-December 22, 2018. Isonto elilodwa ngaphambi kwesiqephu sokugcina se-Season 5 sisakazwa.
UTom Everett Scott
UMario Van Peebles
Nakuba i-Z Nation inesabelo sayo sokushona okumangalisayo, njengomlingisi olahlekile u-Harold Perrineau, umlingiswa wakhe oshonile ngaphambi kokuphela kwesiqephu sokuqala naphezu kokukhushulwa njengesihlabani. I-Z Nation yayintula isabelomali se-The Walking Dead, kodwa yasivala ngamahlaya agulayo kanye nokwenqaba ukuzithatha ngokungathi sína kakhulu. Ngesizini yesibili, umbhali we-Game of Thrones uGeorge R.R. Martin uvele njengenguqulo yakhe ye-zombie.
Okusamile okuvela ku-Z Nation Netflix Series
I-Z Nation ayizange ibe yisilinganiso esibalulekile. Noma kunjalo, kuhambe kahle kuSYFY, yingakho abalandeli bephoxekile ngesikhathi ikhanselwa ngemuva kwesizini 5. Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngezizathu zokukhanselwa kombukiso, kungenzeka ukuthi kunento yokwenza nokuthi inethiwekhi ikhetha ukuvala yonke imibukiso yayo ngezinkathi ezinhlanu zonyaka, ngenxa yokukhuphuka kwezindleko zokuqhubeka.
Abalandeli beZ Nation bangase bathole induduzo ngokuthi umsebenzi wohlelo olwandulela i-Black Summer wawuqale kahle ngesikhathi ukhanselwa. Yize ithoni yalezi ziqephu ezimbili ihluke kakhulu, lokhu kumelele umsuka walolu bhubhane olukhonjiswe ku-Z Nation. Uhlelo nalo luzovuselelwa okungenani isizini eyodwa ngaphezulu. Kodwa-ke, ithemba labalingiswa beZ Nation abawela ngaphesheya selikhishiwe.
Sidabukile njengawe, kepha iphetha kanjalo iZ Nation. Uma uthanda isitayela sokubhala nolwazi oluhlanzekile, ungakhohlwa ukusifaka ibhukhimakhi! Kuze kube olandelayo, bheka!
Ingabe I-Citi Workspace Remote Kulula Ukuyingena? Ngena Ngena Ngemizuzwana embalwa
Indlela Umkhathi: Isambulo Ingxenye 2 Yaphela Ngayo?